मलाई मिस नगाटोरोसँग नराख्नुहोस् - सीजन २ प्रीमियर मिति + अवलोकन र विचारहरू - पालना दृश्य
मलाइ नगाटोरो सीजन २ लाई बदमासी नगर्नुहोस्
by Dima XNUM Xth712th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड मलाई नराम्रोसँग मिस नगाओतो - सीजन २ प्रीमियर मिति + अवलोकन र विचारहरू
मलाई मिस नगिएटोरोसँग टोय नपुर्याउनुहोस् एनिम भनेको मैले विगत २ महिनामा धेरै देखेको छु। यो जताततै भएको छ। मैले यसका बारे मेम्स, मिनी क्लिपहरू, पूर्ण लम्बाई भिडियोहरू र लेखहरू हेरेको छु एनिमे। वास्तवमा, हामीले हाम्रोमा यो सुविधा प्रस्तुत गरेका छौं वसन्त २०२१ को एनिम अवश्य हेर्नुहोस् त्यसैले यो धेरै उल्लेखनीय छ एनिमे जुन हामी कभर गर्न चाहँदैनौं र हामी सायद एक समर्पित समिक्षा पनि फिचर गर्नेछौं।
फोटो समय - मलाई मिस नगिएटोरोलाई नहल्याउनुहोस्
कथा दुई पात्रहरूमा आधारित छ नागोटोरो र नाओटो। हामीले यो फिचर गर्‍यौं एनिमे अघिल्लो लेखमा:
"तपाईं मध्ये केही स्रोत श्रृंखला कत्तिको लोकप्रिय छ भनेर यस श्रृंखलाको बारेमा पहिल्यै सुन्नुभएको हुन सक्छ। मलाई नराम्रो व्यवहार नगर नागोटोरो एक हास्यास्पद र रोमान्टिक स्लाइस अफ लाइफ एनिम हो जुन एक जवान केटाको नामको कहानी अनुसरण गर्दछ नाओटो Hachiouji, जो एक प्यारी केटीको नामबाट बदमाश हुन्छ नागोटोरो. नागोटोरो उसलाई केवल बदमाशी गर्न मन पर्छ सेनपाई सम्भवतः सबैभन्दा क्रूर तरिकामा। ”
नागोटोरो नाओटोसँग खेल्छ - मलाई नमान्नुहोस् मिस नागोटोरो
यदि तपाईंले पहिले नै यो एनिम देख्नु भएको छ भने, त्यसोभए तपाईंले पक्कै पनि सीजन २ को आशा गर्दै हुनुहुन्छ र बीचको रोमान्सको सम्भावित निष्कर्षको लागि। नागोटोरो र नाओटो, यो सबै कुराको लागि हामी पर्खिरहेका थियौं र यसैले यो एनिममा हामी छलफल गर्नेछौं कि मौसम २ सम्भव छ वा छैन र यो प्रिमिअर हुनेछ।
मा मुख्य पात्रहरू एनिमले मलाई मिस नागोटोरोसँग टोय नगर्नुहोस् र ती मध्ये धेरै धेरै यादगार हुन्। तिनीहरू मध्येका तर्फ विरोधीको रूपमा कार्य गर्दछन् नाओटो तर तीनीहरू सहयोगी क्यारेक्टरहरू जस्तै रिवाउन्डको रूपमा कार्य गर्दछन्। तिनीहरूसँग अद्वितीय एनिमेसन शैलीहरू छन् र प्राय: म तिनीहरूलाई मन पराउँछु।
हायासे नागोटोरो एनिमीका दुई मुख्य पात्रहरू मध्ये एक हुन् र उनी निश्चित रूपमा डोन्ट टोय विथ मी मिस नागाटोरो सिजन २ मा हुनेछिन् ताकि हामी उनको सुन्दर यादगार उपस्थितिहरूको लागि तत्पर हुन सक्छौं किनकि उनी सधैं नागाटोरोको छेउमा छिन्। एनिमे। मा एनिमे जस्तो तपाईंलाई राम्ररी थाहा होला, उनी बदमासी थिचोमिचो गर्न मन पराउँछन् र मूल रूपमा उनको सेनपाईलाई घृणा गर्छन्, नाओटो.
को पाठ्यक्रम को दोस्रो हो नाओटो उसको एउटा नाम छ जुन मैले उल्लेख गरेको छु तर अहिलेको लागि, म उसलाई मात्र बोलाउने छु सेनपाई। उहाँ नायक हुन मानिन्छ तर धेरै अन्डर-मार्गदर्शक र कमजोर छ। उसले निरन्तर साथ दिन्छ नागोटोरो र मलाई सहानुभूति दिन धेरै दिदैन। उहाँसँग कडा भावनाहरू छन् नागोटोरो र Gamo- चान र योसी दुबैको साथी हो।
गुँड छ गामो-चान उनी गामो-चान को रूपमा कार्य गर्दछ मिनी सेनपाईको विरोधी, उनी बारम्बार उनको हेराई उल्लेख गर्दै र कसरी उनको बस्ट सँधै उसको आँखा समातिरहेको छ। उनी एक मुख्य चरित्र भन्दा एक समर्थन चरित्र को अधिक, तर उनको मा एक धेरै बार भूमिका छ एनिमे। उनी सामान्य रूपमा उनीहरूको सम्बन्धलाई सहयोग पुर्‍याउन साना थोरै चित्रहरू सिर्जना गर्दछन्।
अन्तमा हामीसँग छ Yoshi, उनी हाई स्कूलको विद्यार्थी र नागोटोरोको साथीहरू हुन्। उनी प्राय: जसो साथीहरू इशाराहरू वा अन्तिम शब्दहरू नक्कल गर्दछ वा दोहोर्याउँदछ र वरिपरिको अनुसरण गर्दछ गामो-चान, ती सबै यी दुई बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दतको लागि गर्छन्।
मलाई मिस नगाटोरोसँग टोय टोयको समापन
को अन्त्य मलाई मिस नगिएटोरोसँग टोय नपुर्याउनुहोस् हाम्रो विरोधी देख्दैन नागोटोरो वास्तवमा उनको प्रेम सेनपाईलाई। एक धेरै निराशाजनक र निर्णायक अन्तमा एनिमे। तर यसको अर्थ के हो एनिमे, यसले कसरी असर पार्छ वा छैन मलाई मिस न्यागोटोरो सीजन २ मा मिस नगर्नुहोस्।
नागोटोरोले उनको स्ट्री off्ग देखाउँदछ - डू मिली मिस् नागाटोरो
केही फ्यानहरूले भनेका छन् कि नागाटोरोले सेनपाइलाई निरन्तर चिढाउनु वास्तवमा उसले सेनपाइलाई माया गर्छु भनेर भन्नको अनौठो तरीका हो। Don't Toy With Me Miss Nagatoro Season2सम्भव छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न यो महत्त्वपूर्ण भएकोले हामीले अन्त्यमा छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो उहाँलाई व्यक्त गर्ने तरिका हो। यो एक तर्कसंगत सिद्धान्त हो
नागोटोरोले नाओटोलाई गिल्ला गरे -
? राम्रो ... हुनसक्छ, त्यो उत्तर हो। मलाई लाग्छ कि यो अलि धेरै पूर्वानुमान योग्य छ तर मैले यसलाई भूतमा लगाउने छैन। यसको कारण यो हो कि म in्गामा हामी वास्तवमै कहाँसम्म पुग्न सकेनौं नागोटोरो लाई स्वीकार्छ सेनपाई त्यसैले हामी अझै पर्खिरहेका छौं, केवल प्रतीक्षा गर्दै।
के त्यहाँ मेरो साथ टाई छैन मिस् नागोटोरो सीजन २?
मा हाम्रो अध्ययन बाट मलाई मिस नगिएटोरोसँग टोय नपुर्याउनुहोस् हामीलाई थाहा छ कि सबै माa्गाका लागि होइन मलाई मिस नगिएटोरोसँग टोय नपुर्याउनुहोस् पूरा भएको छ। र वास्तवमा यो जून २०२१ को रूपमा चलिरहेको छ। यो उत्तम छ यदि तपाईं एनिमे र मa्गाको प्रशंसक हुनुहुन्छ। नागोटोरो अझै बताएको छैन सेनपाई उनी उनको बारेमा कसरी उल्टो महसुस गर्छिन्।
नागोटोरो र गामो-चान तर्क गर्छन - मलाइ नगाटोरोलाई नहेर्नुहोस्
शो धेरै प्लेटफार्महरु मा प्रशंसित थियो र क्रन्ची रोल मा हेर्न उपलब्ध छ। यो उच्च रेटिंग मिल्यो र पक्कै चाँडै अर्को उपस्थिति बनाउने छ। हामी विश्वास गर्छौं कि मिनेट नाई टोटो विथ मे मिस नागोटोरोको अर्को मौसम हुनेछ। यो धेरै लोकप्रिय छ र मa्गा अझै चलिरहेको छ। त्यसोभए त्यहाँ कुनै श season्का छैन कि त्यहाँ अर्को मौसम हुनेछ मलाई मिस नगिएटोरोसँग टोय नपुर्याउनुहोस् र हामी ती कल्पनाहरू चाँडै नै मैले कल्पना गर्नेछु।
जब मसँग टोय गर्ने छैन मिस नागोटोरो सीजन २ प्रिमियर?
हामी भन्छौ कि उसलाई हाम्रो बारे मा जानकारी छ एनिमे र मa्गा जुन डू टोय विथ मि मिस नागोटोरोको दोस्रो सत्रमा कुनै पनि समयमा प्रसारण हुनेछ 2022 वा मा अन्त of 2021। यो रिलीज भएको बखत पतन हुन्छ, हामी पनि निश्चित छौं डन्ट टोय विथ मी मिस नागोटोरोको दोस्रो सत्रको आवश्यकता धेरै छ र यसको लोकप्रियतामा मात्र यसले थप्नेछ।
दिन बाहिर - मलाई नगाँस्नुहोस् नगाटोरो मिस
यद्यपि एनिम उद्योग एक अप्रत्याशित हो र हामी वास्तवमै निश्चित रूपमा कहिलै भन्न सक्दैनौं कि त्यहाँ हुनेछ मलाई मिस नगिएटोरोसँग टोय नपुर्याउनुहोस् सीजन २ यस कारणका लागि हामी तपाईंलाई यो नबनाउन आग्रह गर्दछौं तर आफैलाई सोधपुछ गर्न र एनिमेसको बारेमा हाम्रो नयाँ लेखहरूसँग अप-टु-डेट राख्नुहोस्।
हामी जहिले पनि आशा गर्दछौं कि यो लेख तपाईंलाई सूचित गर्न प्रभावकारी भएको छ जस्तो कि यो हुनुपर्दछ। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं हाम्रो लेखहरू पढ्नुहुन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राम्रो दिन र सुरक्षित रहनुहोस्! यदि तपाईं साइटलाई समर्थन गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं तल हाम्रा केही सामानहरू खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
CVS हन्न्या वर्षा जैकेट
महिला सीवीएस साँझ दानव लांग स्लीभ शर्ट।
अघिल्लो प्रविष्टि २०२१ को सर्वश्रेष्ठ एनिम कोस्प्ले सहायक उपकरणहरू
अर्को प्रविष्टि किन तपाईंले सामुराई चैम्पलो हेर्नु पर्छ